Nanofa mpisolovava izahay androany | Martech Zone
Tsy zavatra ratsy io.
Isan-kerinandro, mandritra ny herintaona mahery, dia nisy fampahatsiahivana nataoko hatramin'ny 43 zavatra Manomboka orinasa mahomby. Baiko avo lenta izany! Ny fananganana orinasa dia zavatra iray, ny fahombiazany dia zavatra hafa iray hafa.
Nahita fahombiazana kely tamin'ny bilaogy aho ary manohy mandray anjara fanampiny noho ny bilaogy. Tamin'ity herinandro lasa ity, nanakatona fifanarahana lehibe 2 aho, ary maharitra amin'ny fotoana maharitra izany miaraka amin'ny fahafaha-mitombo taonina. Ho fanampin'izay, niara-niasa tamin'ny namana Stephen aho tamin'ny fitondrana ny fangatahana an-tsarintany an-tsena. Mampihomehy, ny vola miditra amin'ireo ezaka rehetra ireo dia mbola hampiasa vola hafa raharaham-barotra.
Mampahafantatra Koi Systems, Llc
Androany maraina, Bill, Carla, Jason sy izaho dia nitana ny serivisy an'ny David Castor ary ny orinasan-dalàna, Alerding Castor, hanampy amin'ny fanombohana ny Koi Systems, Llc.
Ny tenan'i David dia nanao anarana miavaka ho azy ao amin'ny sehatra fanombohana Internet. Mpiara-miasa amin'ny fahombiazanaTM dia ny byline an'i Alerding Castor. Izy ireo dia fofonaina rivotra madio sy madio ao anatin'ny tontolon'ny lalànan'ny orinasa. Raha ao amin'ny lozisialy ho toy ny indostrian'ny serivisy ianao dia manampahaizana manokana amin'ireto lafiny ireto ny firm David:
Fahazoan-dàlana sy teknolojia
Internet, lozisialy ary lalànan'ny solosaina
Formation sy Safidy Entity
Lalàna iraisam-pirenena momba ny asa
Fandrafetana sy fifampiraharahana momba ny fifanarahana tsotra sy sarotra ary antontan-taratasy tsy azo antoka
Fifanarahana tsy fifaninanana
Lalàna momba ny tsiambaratelo
Efa nanokana fotoana be dia be tamin'ny orinasanay izahay ary te-hahazo antoka fa mandefa azy io araka ny tokony ho izy, ka ity dia dingana iray mankany amin'ny lalana marina! Matoky tanteraka ny orinasa David, amin'ny indostria amin'ny Internet, ny fanombohana amin'ny Internet ary ny lozisialy amin'ny maha orinasa orinasa iray azy.
Nizara taminay ny fientanam-pony i David niasa niaraka tamin'ireo mpandraharaha mba hahatanteraka ny nofinofisin'izy ireo. Manantena ny handefa ny anay izahay!
Tags: casteur alerdingmpisolovavarafitra koi
Fanamarihana nataon'i Threaded nataon'i Brian: novainaina
Sep 6, 2008 amin'ny 12: 11 AM
Wow, Douglas! Arahabaina! Toa dingana tsy dia mahavariana loatra ho an'ny orinasanao io.
Sep 6, 2008 ao amin'ny 1: PM PM
Misaotra Kevin! Nahazo mpanoro hevitra tsara izahay. Chris Baggott an'ny Compendium Blogware ary Kristian Andersen samy nalala-tanana be dia be ary nanome torohevitra iray taonina ho anay.